Home News Shaqsi si weeyn loo yaqaano oo Xalay K/Afrika Lagu Dilay!!
Shaqsi si weeyn loo yaqaano oo Xalay K/Afrika Lagu Dilay!!
Waxaa Xalay Kooxo Burcad ah ay dalka koonfur Afrika ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka ku Ganacsada dalkaas koonfur Afrika.
Alle ha u naxariistee Muwaadinka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu Magacaabi jirey Yuusuf Xuseen Xasan waxa uuna ku magac dheeraa (Yusri-fuuda).
Dilka, waxa uu ka dhacay magaalada Cape town ee dalka Koofur Afrika,waxana dad ku sugan Koonfur Afrika ay sheegeen in Burcad hubeysan ay dhowr xabadood la dhaceyn,isla markaana dhaawac soo gaaray uu u geeriyooday.
Alle ha u naxariistee Yuusuf Xuseen Xasan (Yusri-fuuda) ayaa ka mid ahaa Wariyeyaashii sida weyn looga yaqaanay Magalada Muqdisho wixii ka horeeyey Sanadkii 2011,isaga oo Sanadkii 2009 ka tirsanaa Idaacadda Soomaaliweyn ee Magalada Muqdisho.
Dilka Caawa muwaadinka Soomaaliyeed loogu geystay dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka mid yahay dilalka mar walba loogu geysto dalkaas,iyada oo dowladda Koonfur Afrika aysan waxba ka qaban.
Previous articleMW Farmajo oo Itoobiya u fasaxay inay Soo weerari Karto Somaliya markey Doonto.
Next articleMudanayaasha Baarlamaanka oo Maanta ka Doodaya Amnigga Magaalada Muqdisho!!
Beenta Baraha Bulshada ay Madaxtooyada ku Faafiso
Askar iyo Saraakiil xabsi loo taxaabay(sababta ogoow)